विश्वकै सबैभन्दा सानो देश भ्याटिकन सिटीका यस्ता अचम्मैका रोचक तथ्य बारे जानकारी लिनुहोस
सवारी साधन चलाउदा नियम मिच्ने सवारी चालकलाई फुलको गुच्छा र खादा
अचम्मैको कुरोः बुद्धको मुत्तीबाट निस्कियो मान्छेको शरिर, यस्तो तथ्थ बाहिरियो !
एक अध्ययनले भन्छ, सित्तैमा खान पाईने भएकोले स्त्रीहरु डेटिङमा जाने गर्छन !
गुल्मीमा भेटियो नेपालकै महँगो काठ, १ किलोकै पर्छ ३० लाखभन्दा बढी, यसरि बेच्नुस र लाखौ कमाउनुस
विश्वलाई नै तहल्कामच्चाउने गरी उत्तर कोरियाले बनायो भोकलाग्दा खान मिल्ने कपडा !
२०० बढी प्रेमीहरुको असफल प्रेमपछी अन्तत: बेलायती मोडलले गरिन् कुकुरसँग विवाह !
गर्ववती अवस्थामा रहेकी महिलाले केरा खादैमा छोरा जन्मिन्छ र ? यस्तो भ्रम देखि वास्तविकता